Gabay - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Taariikhda Gabayada)
Fiiro gaar ah: Maqaalkan wuxuu u baahan yahay in la soo koobo, laga dhex saaro qoraalka macno darada ah; isla markaana loo habeeyo si cilmiyaysan.
Xasuusnow meeshaan waxaa looga hadlayaa Gabay oo kali ah, loogama hadlayo Abwaan ama Gabyaa caan ahaa.
Gabay (Af-Ingiriis: Poetry, Af-Carabi: شعر ) wadar (Gabayyo) waa Nooc maansada ka mid ah oo leh qaafiyad iyo luuq oo aan muusig loo tumin . Gabayga ayaa ah waxa ugu sarreeya ee hadal lagu cabiro, ka yaqaana waxaa loogu yeeraa Gabyaa ama Gabayyahan ,
1 Gabay waa maxay?
2 Abtirsiinta gabayga
4 Booska uu ka joogo soomaalida
5 Dhismaha gabayga
8 Gabayahannada Caanka ah
Gabay waa maxay?
Gabay waa hadal murtiyeed taxan oo ka kooban beydad (tuducyo) mid waliba isugu xidhan yahay laba qaar oo leh qaafiyad iyo miisaan ka dhexeeya.
inkastoo aan la isku waafaqsanayn abtiriska gabay, maanso, suugaan, oo nimba meel u qaaday hadana waxaan la isku diidanayn in gabay yahay jaad ka mida Suugaanta.
Gabaygu qaran ahaan waa Hadal,
Qabiil ahaan waa Suugaan,
Qoys ahaan waa Maanso,
Qof ahaanna waa Gabay.
Gabaygu waa murtida ugu weyn ee wax lagu cabiro, Haddii uu hadalku yahay dhawaaq la isku afgarto oo ka sarreeya dhawaaqa xayawaanku isku afgarto, gabaygu waa heerka dhawaaqaas oo kor loo sii qaaday laguna qurxiyey falsafad, khayaali iyo naaxiyad.
Gabaygu yahay boqorka Suugaanta Soomaaliyeed, isla markaana ah midka ugu adag xagga qaafiyadda, Gabaygu waxa uu uga duwanyahay maansada inteeda kale waxa uu leeyahay miisaan ku salaysan Hojis iyo hooris (Qayb hore iyo Qayb dambe), isla markaana waxa shardi ah in ugu yaraan laga helo laba xaraf oo isku mid ah oo midna hinjska ku jiro midna hooriska si loo deel qaaf tiro gabayga, laba xaraf oo isku mid ah hadii laga waayo gabaygaasi waa (deelqaaf) nuuqus mana deel qaaf tirra, si kastoo gabaygaagu u miisaamo shaqalka iyo hadanaa haduusan deel qaaf tirrayn gabaygaasi waa jacbur.
Booska uu ka joogo soomaalida
Gabaygu waa hubka laba afle ah oo nimba dhinucuu rabo u adeegsado, wuxuuna qaban karaa wax seef iyo waran qaban karin, soomaalida ayaa gabayda markii dareen jiro sida Murugada, Gumaysiga, Dhiidhada, Colaada, Farxada, Guusha, Guubaabada, jacaylka,
Gabayga ayaa ka dheerayn jiray haada iyo gaadiidka, isagoo la isu marin jiray meelo fog fog. nin aan waligiis la arag baa lagu aqoonsan jiray gabayadiisa dartood, maadaama meelo aad u fog laga maqlay.
Gabaygu ha u badnaado loollanka iyo fadqalallada cidaha ka dhex aloosan, wuxuuse ka tegey dhaxal culus oo dhinac walbaba leh, baroordiiq, kaftan, diin iyo sifaynta waayaha iyo dabeecadda intaba leh. Ma aha wax iska abuurma ama la iska tiriyo oo dabadeed iska macno beela, ee mar walba wuxuu ahaa warbixin ku saabsan waqtiga la marayo iyo xaaladda nololeed ee qof iyo bulsho lagu jiro. Haddii aynu waddadii dheerayd ee uu gabayga soomaalidu ku soo hayaamay dib u milicsanno, waxaa aynu arkaynaa in uu soo maray maraxalado badan oo ay mid waliba sawir xoog leh inaga siinayso waqtigeedii iyo xaaladdeedii. Mar haddii aanay bulshadii hore wax qori jirin maansada uu gabaygu ugu horreeyaa waa dhabbada keliya ee looga aroori karo taariikhda iyo hiddaha soomaalida.
Ninkii gabay loo tiriyo wuxuu dareemi jiray sidii in la dullaystay oo kale, markaasbuu isna tirin jiray mid aan kii ka dhicin, dad weynaha ayaa mar walba ahaan jiray xaakinnada gabayada, waxaa jira silsilado gabayo ah oo la isu tiriyay oo caan ka noqday gayiga soomaalida oo dhan, waxaa ka mid ah: Silsiladii Guba, Silsiladii Halacdheere, Silsiladii Siinleey, Silsiladdii Deelleey iyo kuwo kale oo badan,
Hoyaalayeey hooyaalayey, hoyaalayeey hooye
Waxaa habboon maansoyahanku in uu ilaaliyo anshaxa suubban iyo edebta guud. Haddiise uu dhex dabbaasho aflagaaddo iyo meelkadhac, si kasta oo ay maansadu fan ahaan u dhisan tahay waa deelqaaf. Waxaa jirey rag tiriyey tixo fan ahaan sarreeya laakiin asluub ahaan aad u hooseeya sidaana ku milge iyo maamuus waayey. U malayn maayo taariikhda in uu soo maray gabyaa Maxamed Cabdulle Xasan deelqaafka noocaas ah kala mid ahi, waayo ma jirin erey xun oo uu carrabkiisu ka dhawrsan jirey. Laakiin dhaliishaa isaga waxaa u asturay maansadiisa badan ee wanaagsan.
Gabayahannada Caanka ah
Cabdullahi M. Dhoodaan
Cabdilahi Suldan Timacadde
Cilmi Barrow Waceer
Barre Maxamed Fiidow
Ibraahin Yuusuf Axmed HAwd
Gabay waa maxay
Hadal iyo gabay
Gabay mise geeraar
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabay&oldid=167431"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 02:55, 14 Maarso 2017.